बक्स अफिसमा 'वार'काे आक्रामक व्यापार, कति कमायो अहिलेसम्म ?
काठमाडौं – बक्स अफिसमा ऋतिक रोशन र टाइगर श्रौफ स्टारर चलचित्र ‘वार’ ले आक्रामक व्यापार गरेकाे छ ।
यस चलचित्र २ सय करोडको क्लव नजिक प्रवेश गरेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्शका अनुसार, चलचित्रको हिन्दी भर्सनले सोमवार भारतीय बक्स अफिसमा करिब २०.६० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उनका अनुसार, यस चलचित्रले सोमवारसम्ममा १८०.३० करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
यसमा चलचित्रको तमिल र तेलुगू भर्सनको कारोबार पनि जोडिएको छ । भारतमा यस चलचित्रले कुल १८७ दशमलव ७५ करोड कमाएको उनले बताएका छन् ।
गान्धी जयन्तीको अवसरका २ अक्टोवरमा रिलीज भएको सो चलचित्रको निर्देशन सिद्धार्थ आनन्दले गरेका हुन् ।
यस्तो थियो चलचित्र 'वार'मा ऋतिक रोशनको मेहनत (भिडियोसहित)
कति महंगो कपडा लगाउँछिन् प्रियंका ?
आज रेखाको जन्मदिन, रहस्यमयी छ उनको जीवन
यस भिडियोका कारण भाइरल भइन् सनी लियोनी (भिडियोसहित)
यसरी बनाइयो सैफ अली खानलाई नागा साधु (भिडियोसहित)
दिशा पाटनीको ग्ल्यामरस फोटोशूट, हेर्नुस् १२ तस्वीर
पाहुनाले महंगो बिल तिर्न नमानेपछि दुलहीले तोडिन् बिहे ! काठमाडौं — क्यानडाकी सुसन आफ्नो बाल्यकालदेखिको साथीसँग बिहे गर्न लागिरहेकी थिइन् । बिहेको दिनका लागि उनले धेरै व्यवस्थापन गरेकी थिइन् । उनी परिकथाको जस्तो बिहे चाहन्थिन् । त...
शिवम् सिमेन्टका उपभोक्ताहरुलाई चाँदी उपहार
एक्सरसाइज र डाइटिङ गर्ने समय छैन ? यसरी घटाउनुहोस् तौल
बुटवल-पाल्पा सुरुङमार्ग निर्माण शुरू गरिने महासचिव पौडेलको प्रतिबद्धता
युएईका नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन मन्त्री बिष्टको पहल